Soomaali Ma Waxa Ay Ku Heshiisay In Aysan Waligeed Heshiin? | KEYDMEDIA ONLINE
Soomaali Ma Waxa Ay Ku Heshiisay In Aysan Waligeed Heshiin?
Maxamed B. Ibrahim — Sida aan ku balanqaaday »Qormadii hore« , waxaan filaayey in Dad badan oo Soomaali ah ay Taageeri doonaan fikirkii aan soo jeediyey ee ahaa in la helo Dad Soomaali ah oo u gurmada sidii loo joojin lahaa dhiiggan daadanayo Maalin kasta laakiin nasiibdaro sidaan filaayey ma dhicin.
Qormadaydii hore waxa ay xanbaarsaneyd Baaq aan u diraayey Umadda Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa aan is leeyahay waa kuwa hormuudka u ah Bulshada sida Culimada, Aqoonyahanada iyo Siyaasiyiinta, Anigoo ka codsanayey in fadhiga laga kaco oo la iska daayo taxliilinta iyo ka sheekeynta dhibaatada ka jirta Wadanka, oo loo istaago sidii loo badbaadin lahaa dalkan qarka u saran inuu u kala gogo'o gobolo yar yar oo ay kor ka maamulaan dowladaha dariska.
Waxaan qormadaas soo jeediyey il la dhiso guddi ka kooban Culimo, Aqoonyahano iyo waliba Siyaasiyiin xilal ka soo qabtay dalka,si loo kala dhexgalo dhinacyadan isku dilayo dalka gaar ahaan Koonfurta sida Dowladda Federaalka iyo Xarakada Al-shabab ka dibna loo gudbo dhinaca Waqooyi galbeed oo Iyagana sheegtay in ay go'een si mar kale loo mideeyo dalka.
Nasiibdaro ma dhicin sidaan filaayey waxaana E-Mailo ii soo diray dhowr Qof oo qaarkood Aniga Igula yaabay Soomaalinimada aan ka hadlayo, halka qaar kalena ay ku gaabsadeen waa talo fiican, waxaase aad iila yaab badneyd nin sheegtay inuu taageero gooni isu taagga Soomaaliland, waxa uuna ninkaasi u hadlay si Soomaalinimo iska daaye xitta Islaamnimo aan lagu sheegi Karin, waxaan ii soo baxday in ay aad u kala fogaadeen dadka Soomaaliyeed.
Dadkii lagu tilaamayey in ay indho u yihiin dadka Soomaaliyeed sida Culimada,Aqoonyahanada iyo Siyaasiyiinta halkii laga rabay in ay u istaagaan sidii loo joojin lahaa dhiiggan daadanayo Maalin kasta waxa ay doordideen in ay Idaacadaha wax ka taxliiliyaan oo kaliya, mar ay marti ku yihiin BBC-da iyo mar ay marti ku yihiin VOA-da iyo mar ay TV-yada ku fadhi ku diriraan. Ilaahayow ceebteena astur.
Waxaa sidoo kale doorkoodii gabay Culimaddii Soomaaliyeed ee lagu yaqaanay Musaalaxada iyo wanaagga, halkii ay ahayd in ay la fadhiisan kooxahan dirirayo magacay rabaanba ha wataane si loo soo afjaro dagaaladan sokeeye ee aan dhamaadka lahayn, waxa ay doorbideen in ay Fataawo ku kala taageeraan dhinacyadan isku baabi'iniyo dhalinyaradeenii.
Waxaa sidoo kale kaalintoodii gabay Odayaashii dhaqanka oo udub dhexaad u ahaa Mujtamaca Soomaaliyeed, sidoo kale u taagnaa heshiisiinta iyo xalinta khilaafaadka ka dhex jira Bulshada dhexdeeda waxayna doorbideen halkii ay isku keeni lahaayeen dadka in ay sii kala fogeeyaan.
Ma jiro shacab dhexdhexaad ah oo ka fikara mustqabalkiisa sidoo kalena garab istaagga kuwa ka naxayo dhibka haysta Umadda, waxaana lagu mashquulay dano deegaan iyo mid qabiil halka la iska iloobay dantii guud iyo musataqbalkii Umadda Soomaaliyeed, Waxaana xal la mooday in la taageero Siyaasiyiin xukun doon ah oo aan dal iyo diin midna dan u hayn.
Waxaa Iyadana nasiib daro ah in aan taladeenii gacanta u galinay kuwii shalay burburiyey dalkeenii haatanna hortaagan in la dhiso ciidan xoogan oo la wareega amaanka dalka, Iyagoo marba soo saarayo warbixino aan sal iyo raad lahayn oo lagu jahawareerinayo Umadda Soomaaliyeed iyo dalalka daneeya Soomaaliya.
Inkasta oo aan laga quusan naxariista Ilaahay hadana iima muuqato ifafaalo wanaagsan iyo mustaqbal fiican,waxa ayna u egtahay in ay sii socon doonan dagaaladan sokeeye ee baabi'yey dalkeena iyo khilaafaadkaan Siyaasiga ah ee ka dhexjira Soomaalida dhexdeeda marka ay ugu yar tahay 10 Sano oo kale hadaan loo helin Rag iyo Dumar garasho fiican leh.
Waxaan sidoo kale ii muuqan rabitaan ka imaanayo dhinacyadan ku dagaalamayo dalka gaar ahaan dowladda federaalka iyo Xarakada Al-shabab in ay heshiiyaan si looga baxo dhibaatadan daba dheeraatay, Sidoo kalena dalka looga saaro ciidamadan Shisheeyaha, Waxaa Iyadana aan rajo badan laga qabin in la qanciyo Maamulka Soomaaliland oo sheegay in uu ka go'ay Soomaaliya inteeda kale.
Gaba gabadii waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed diyaar uma ahan waqti xaadirkan in ay heshiiyaan, sidoo kalena ma haystaan dad Waxgarad ah oo dadaal badan ku bixiya sidii ay isugu keeni lahaayeen dhinacyadan is khilaafsan,Waxa ayn taasi keeneysaa in ay ku sii jiraan dhibaatooyinka ay hadaba ku jiraan sida dilka,kufsiga,gaajada,qaxootiga iyo kala qoqobnaanta.
Waxaa Iyadana mudda sii socon doonto faragelinta dowladaha dariska oo qatar ku ah jiritaanka dowlad Soomaaliyeed oo xoog leh hadaysanba la wareegin dalka oo dhan,Waxaana sidoo kale aan mudda sii ahaaneynaa dadka ugu liita dunida kuwaas oo u nool sidii waxuushta oo kale.
Waxan hadalkeyga ku soo gaba gabeynayaa, Walaalayaalow aan u naxno dadkan masaakiinta ah ee ku rafaadsan gudaha iyo dibadda iyo waliba dhalinyaradan ku baab'ayso badaha iyo saharaha,hadaan diidno ogaada waxaa imaan doonto Maalin qof kasta la weydiin doono wixii uu geystay iyo wixii uu haleeyey. War ninkii ay ceebi dhibeysow xal raadi xoog xal maahee.